Zeziphi ezona zikhetho zibalaseleyo zokutyala imali kwiNasdaq? | Ezezimali
Zeziphi ezona zikhetho zibalaseleyo zokutyala imali kwiNasdaq?
Ezezimali | 01/09/2021 13:06 | Ukuhlaziywa ukuba 01/09/2021 23:54 | Bolsa, Iimveliso zezemali
I-Nasdaq Stock Market (uMbutho weSizwe weeNtengiso zaBathengisi abaQinisekisiweyo) imakethi apho iifemu eziphambili zetekhnoloji zidweliswe khona.
Unokufumana iinkampani ezomeleleyo zokutyala imali kwiNasdaq. Nangona kunjalo, Ixesha elizayo leNasdaq ivumela ukuboniswa kuyo yonke imarike ngokubanzi okanye usebenze ngokukodwa. Esi sixhobo semali sithatha i-Nasdaq 100 njengesiseko sayo.
Ngayiphi na imeko, sibonisa ikamva laseNasdaq elikwizikhundla eziphezulu kwiimali zentengiso.
1 Izinketho zokutyala imali kwiNasdaq
1.3 Oonobumba (Google)
Izinketho zokutyala imali kwiNasdaq
I-Apple inesakhono sokuguqula nayiphi na imveliso eyivelisa njengeyona nto ithengiswayo. Khathalela zonke iinkcukacha, ukusuka kumgangatho wezinto kuyilo loyilo.
Phakathi kwamandla alo amakhulu kunayo Ukwahluka kweshishini, isicwangciso-qhinga sokukhula kwalo kunye nomfanekiso walo wegama.
Yinkampani ehamba phambili ekwenziweni nasekuthengisweni kwezixhobo eziphathwayo, iikhompyuter kunye nezinye izixhobo zetekhnoloji ezinxulumene nonxibelelwano kunye nehlabathi lemultimedia. Okwangoku yeyona capitalisation ikwiNasdaq Stock Market.
Singayijonga njani Ixabiso lonyuswe kakhulu, kwanasemva kwengxaki ebangelwe nguCovid-19 (ibango leemveliso zokusebenza ekhaya zandisiwe).
I-classic kwishishini lesoftware. Nangona u-Microsoft okwangoku esenza ezinye iintlobo zeenkonzo (ezinje ngentengiso ekwi-intanethi). Ikwayila, ivelise kwaye ithengise izixhobo zetekhnoloji.
Le nkampani ihlala igqwesa kwicandelo lekhompyutha lomntuInkqubo yokusebenza kunye nokusetyenziswa kwemveliso, ulawulo, iseva, imidlalo yevidiyo, njl.
Akuthandabuzeki IMicrosoft yinkampani eyahlukeneyo. Zonke iimveliso zazo zinohlobo oluthile lokufumana ukhuphiswano. Ukukhula kwezabelo zayo kuye kwamangalisa ukusukela kwi-IPO yayo kwi1986.
Ewe, xa ubhekisa kumzi-mveliso wetekhnoloji, ingxilimbela enkulu ye-Intanethi ayinakho ukungabikho: uGoogle; Olona loncedo luphambili lweAlfabhethi (kulapho onke amaqela aGoogle ahlelwe khona).
Akukho mfuneko yokuchaza inani lemithombo yengeniso le nkampani inayo, yonke inxulumene neemveliso zedijithali kunye neenkonzo (apho ibime khona njengenkokeli yokwenyani). Ialfabhethi yenye yezona nkampani zinemali eninzi kwiNtengiso yeMasheya yaseNasdaq kunye nolunye ukhetho olufanelekileyo lokutyala imali kwitekhnoloji.
Njengoko iqhelekileyo phakathi kwezona ndawo zintle zeNasdaq, Inkampani iye yafumana uxabiso olomeleleyo kumaxesha akutshanje.
IAmazon yenye yeengxilimbela zentengiso ye-intanethi (kunye neAlibaba). Ngokwenyani, yinkampani ezinikele kwintengiso, enikezela ngezi nkonzo kubantu besithathu, endaweni yenkampani yetekhnoloji (nangona isebenzisa indalo yedijithali ukuphuhlisa ukuthengisa).
Inzuzo yeAmazon inyuswe kakhulu ngexesha lobunzima be-coronavirus. Amanyathelo othintelo anike amandla okomeleza kwintengiso ye-Intanethi. Konke oku kuncede ukunika ukomeleza ngamandla kwizabelo zale nkampani ngexesha le-2020.
Enye yeenkampani ezinkulu ezenziwe kwiNasdaq nguFacebook. Inethiwekhi yentlalo ikhuphe uthotho lweenkonzo ezinxulumene nokunxibelelana nabantu nokwenza ukuba kube lula ukwabelana ngamava. I-Facebook ine-Instagram, Messenger, WhatsApp kunye ne-Oculus.
Olu hlobo lonxibelelwano ligqitha kubudlelwane phakathi kwabantu kwaye lukhonza iinkampani ukwazisa ngeemveliso zazo. Njengokuba kunjalo bavumela ukuba bazi iimfuno zabasebenzisi kunye nokunikezela ngeenkonzo ezisemgangathweni kubathengi.
Zininzi izinto eziluncedo ezikhoyo kule nethiwekhi akumangalisi ukuba ixabiso lesabelo sabo lenyukile.
I-Tesla yenye yeenkampani ezifumene ukuthandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo ngenxa yoyilo kunye nophuhliso lwezithuthi zombane.
Kwilizwe eliya lisiqonda ngakumbi isidingo sokufuna eminye imithombo yamandla, kuyaqondakala ukuba inkampani ezinikele ekuvelisweni nasekugcinweni kweenkqubo zamandla elanga, kunye nokwenziwa kwezithuthi zombane ngokupheleleyo, Amanqanaba phakathi "aphezulu ali-10" ngemali eyimali yentengiso kwiNasdaq.
UTesla ube yinkampani ekhethekileyo kwicandelo lakhe kwaye, njengoko kunokubonwa, Ngexesha lonyaka we-2020 (xa kwaqhambuka ubhubhane we-coronavirus) izenzo zabo ziye zafumana ukomelela okunamandla phezulu.
Ixesha elizayo kunye noKhetho ziimveliso zemali ezingangqalanga kwaye kunokuba nzima ukuziqonda.
Eli nqaku linokuthathwa njengesiqwenga sentengiso se-ibroker.es Ungajonga ulwazi ngakumbi malunga nemveliso kwi-KID ekhoyo kwi-web ibroker.es
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Zeziphi ezona zikhetho zibalaseleyo zokutyala imali kwiNasdaq?
Ipenshoni yomhlolokazi: iimfuno
Ifom 303: Yintoni, xa uza kuyivelisa?